If You are Invited to Google Plus+
Opp.. This isatitle for everyone on the web to be interested. What is google plus?Google plus isasocial network service provided by google. So what can we do with it?
Most of us are the users of modern social networking sites and seem we love social networking by looking the annual profits of social networking company.Google also want to get some traffic in social network market and he tried with buzz.Unfortunately buzz can’t play the match well and even… Continue
Added by Thanyawzinmin on July 31, 2011 at 4:14pm —
No Comments တကယ်တတ်ကျွမ်းသူဆိုတာ.............
ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အထူးသဖြင့်တော့ကွန်ပျူတာနဲ့ပတ်သက်ပြိးကျမတွေ့ဖူးကြုံဖူးတာလေးကိုဝေမျှချင်ပါတယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်က မကွေးနဲ့မင်းဘူးဆိုတာမှာတံတားဆိုတာဆောက်နေတုန်းအခြေအနေပဲရှိပါတယ် အဲဒီမြို့နှစ်မြို့ကိုကူးချင်ရင်ပဲ့ထောင်လို့ခေါ်တဲ့စက်တပ်လှေတွေနဲ့သွားကြရပါတယ် နွေရာသီဆို၇င်သောင်တွေပေါ်ပြီးရေနည်းနေတဲ့အတွက် တစ်နာ၇ိလောက်နီးပါးမောင်းရပါတယ် အဲဒီလိုအချိန်များမှာဆိုရင် ၀မ်းရေးအတွက်ဈေးသည်လေးတွေပါလာတတ်ပါတယ် အဲဒီဈေးသည်လေးတွေထဲကမှ ထူးထူးခြားခြား ကျောက်ချဉ်နက်ရောင်းတဲ့… Continue
Added by fighter on July 29, 2011 at 11:41am —
ကျွန်တော်ပြောတာက KMD ကဆရာလို့မဆိုလို့ပါ။ ကျွန်တော် KMD မှတက်တုန်းကလို့ပြောတာပါ။ အခုပြန်ရေးတာက မကွေ: KMD လို့ပြန်ရေးထားပါတယ်။ မကွေး KMD က ဆရာတွေကို အားနာဖို့ကောင်းပါတယ်။ စာကိုသေခြားဖတ်ပြီးကြည့်ပါအုန်း။ မိမိ၏ အရေးအသားကြောင့် KMD ကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ကွန်ပြူတာမိခင်က KMD ပါ။ Added by zayarkyaw on July 28, 2011 at 3:20pm —
No Comments How to fix the OS list timeout problem of Windows 7
အားလုံးသိကွတဲ့အတိုငျး Microsoft Windows 7မှာ တဈခုထကျပိုတဲ့ Operating Systems တှသေုံးထားလို့ boot loader မှာ OS listing ကို ပွငျခငျြတယျ ဆိုရငျ Windows XP တုနျးကလို boot.iniမှာ လှယျလှယျနဲ့ပွငျလို့ မရတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ ကနြျောတို့ ဘာလုပျရမလဲ ဆိုတော့ My Computer (Right click)\_Properties\_System\_Advanced… Continue
Added by YM on July 27, 2011 at 4:03pm —
Satisfying these criteria is mandatory. Only candidates with the below qualities will be considered. Knowledge in Drupal7Knowledge of PHP, MySQL, CSS Knowledge in Java and J2ME Knowledg…
Satisfying these criteria is mandatory. Only candidates with the below qualities will be considered. Knowledge in Drupal7Knowledge of PHP, MySQL, CSS Knowledge in Java and J2ME Knowledge in Objectiv C Knowledge in JQueryYour main responsibilities will include: Designing, developing and maintaining websites, mobile web applications and Java based mobile applications Develop and maintain web applications/pages… Continue
Added by CyberCode on July 25, 2011 at 5:04pm —
No Comments ၁၉ ဇူ လိုင် မမေ.နိူင်
၁၉ ရက်နေ . က မန္တ လေး သွားနေလို. မကွေး မှာ ရှိ မနေ ခဲ.ပါဘူး။
ဒီနေ. မှ မကွေးကို ပြန် ရောက် ပါတယ် ။ အခြေအနေ တွေ သိ ချင် လို. စပ်မိ စပ် ရာ မေး ကြည်. တော. ၁၉ ရက် နေ. မှာ ဘာ မှ မလုပ်ကြဘူး တဲ.ရှင်။အာဇာ နည် နေ. ကိုများမေ.နေ လိုက် ကြ တာ ။ တော် တော် ဆိုး ကြ တာ ပဲ နော်။ ဗိုလ် ချုပ် အောင်ဆန်းနှင်. ရဲ ဘော် တွေ အသက် စွန်. ပေး ခဲ.ရတဲ. အာဇာနည် နေ. ကို များ ဘယ်လို လုပ် ပြီး အမှတ် မရ နိုင်ဖြစ်သွား ကြတာ လဲ ဆိုတာ တော. ပြော ဖို.ရာ မစွမ်းတော. ပါ ရှင်။
အရင်နှစ်ကတော. ဗိုလ်အောင် ဆန်း ကို… Continue
Added by htike thu san on July 20, 2011 at 5:42pm —
Mozilla L10ns is welcome myanmar enthusiasts !
ကြှနျတျောတို့အခုတဈလော မွနျမာနိုငျငံရဲ့အိုငျတီ နယျက လူတျောတျောမြားမြားဟာ လိုကယျလိုကျဇေးရှငျးချေါ ဘာသာပွနျခွငျးကို အားကွိုးမာနျတကျလုပျနကွေတာကိုတှရေ့ပါတယျ။ အရငျကလဲလုပျနကွေတာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ အခုမှဘာလို့လာပွောနလေဲလို့ပွောလဲခံရမှာပဲ။သို့ကြှနျတျောလဲအခုမှသိတာကိုး။ ကြှနျတျောကတော့ မျောဇီလာဖောငျးဒေးရှငျးရဲ့ထုတျလုပျအသုံးခပြရိုဂရမျတဈခုဖွဈတဲ့ ဖိုငျးယားဘောကျဈ(မီးမွခှေေး)အငျတာနကျကွညျ့ရှူ ပရိုဂရမျကို ဘာသာပွနျ ခွငျးအသငျးမှာပါဝငျလှူပျရှားနပေါတယျ။ ကဲ ဒီတော့ ကြှနျတျောတို့ဘာလုပျကွလဲ ?… Continue
Added by Thanyawzinmin on July 20, 2011 at 4:30pm —
No Comments Aurora Firefox Myanmar Language Pack
Myanmar L10N Team https://www.facebook.com/groups/250639624952000?ap=1
တှငျ ဖွနျ့ဝသေော Aurora Firefox Myanmar Language Pack ကို စမျးသပျထားသော Screen Shoot မြားဖွဈပါသညျ။ လိုအပျသညျမြားကို အကွံပေးနိုငျရနျအတှကျဖွဈပါသညျ။ Package ကို အောကျပါလငျ့မှ ယူ၍စမျးသပျနိုငျသညျ။…
Added by Kyaw Zwa Thant on July 19, 2011 at 8:40pm —
Java SE7: Files Class ၏ အသုံးပွုပုံမြား
ပွီးခဲ့သော Java SE7အခနျးဆကျဖွငျ့ New IO တှငျပါဝငျမညျ့ Path Interface နှငျ့ Paths Utility Class ၏ အသုံးပွုပုံမြားကို ဖျောပွခဲ့ပါသညျ။ ယခုအခနျးတှငျလညျး ဆကျလကျ၍ File နှငျ့ Directory မြားကို အသုံးခပြုံမြားကို ဖျောပွသှားပါမညျ။
1. ဖိုငျနှငျ့ Directory မြားကို စမျးစဈခွငျး
ကြှနျတျောတို့ ယခငျတဈခေါကျလလေ့ာခဲ့သော Path Interface ၏ Instance သညျ၊ File မြားနှငျ့ Directory မြားအား ကိုယျစားပွုနိုငျ ပါသျောလညျး၊ ထိုဖိုငျမှာ လကျရှိ File… Continue
Added by Min Lwin on July 18, 2011 at 3:00pm —
No Comments Kaspersky 2011 Crack for 3701 days
Downlaod (filesize = 1.12MB) >>http://sawsan.googlecode.com/files/Kaspersky_2011_Crack_for_3701_da... If you can not install this crack program.Download >> kas11_crack_install.pdf (filesize = 68KB) >> from … Continue
Added by sawsan on July 18, 2011 at 1:30pm —
အသုံးပွုခငျြသူမြားအတှကျ အသုံးပွုနညျးကို တငျပေးလိုကျပါတယျ... ဒါကမွနျမာလို... http://goo.gl/6TOhPဒါကအင်ျဂလိပျလို http://goo.gl/xd3gz
စမျးသပျအသုံးပွုခငျြသူမြား ဒီနရောမှာ မေးလျမြား ပေးထားပါက invite… Continue
Added by Kyaw Zwa Thant on July 17, 2011 at 10:55pm —
အညာတရ တစ်ယောက် ၏ ဆန္ဒများ
တိုးတက်နေသည်. ခေတ်အခြေအနေ အရ လူငယ်များအနေနှင်. ITအပေါ်တွင်စိတ်ပါဝင်စားမှုများလာ သည်ကို တွေ.မြင်နေရပေသည်။IT နယ်ပယ်တွင် ခြေချရန် ကြိုး စားနေသည်. သူ များအား ကျွန်မတို. အနေဖြင်.အားပေးကူညီသင်.ပေ သည်။
ွှွှုှုွုှ့ IT (INFORMATION TECHNOLOGY) ပေါ် အခြေ ခံကာ ဘက်စုံ ထောင်.စုံ မှ နည်းပညာ… Continue
Added by htike thu san on July 17, 2011 at 12:18pm —
COMPUTER UNIVERSITY မကွေး မှ ပဲ.တင် သံများ
နည်းပညာတိုးတက်နေ သည်.ယနေ.ခေတ်ကာလမှာ လူတော်တော်များက နည်းပညာကိုအသည်းအသန် ရှာဖွေနေ ကြတာကိ်ု သင်တို.တွေ.မြင်နေကြရတယ်မဟုတ်ပေဘူးလား ။ လူအများစိတ်ဝင်စားနေ တဲ. အ ရာကို ကျွန် မ တို.လည်းရှာဖွေကြတာဟာမထူးဆန်းပါဘူး ။ဒါကြောင်.ကျွန်မ ကတော. computer university ကို တက်ဖို.ဆုံးဖြတ် ခဲ.တာပေါ.နော်..........
ကျွန်မထင်ခဲ. တယ် computer university တက် ရင် သိ ချင်… Continue
Added by htike thu san on July 14, 2011 at 10:48am —
contact king.empire07@gmail.com Added by Win Min on July 13, 2011 at 9:30pm —
No Comments Mozilla Myanmar Localization is inafinal stage now!
I am writing this post to let all of you know that we are on the motive ofalocalization project.The former project leaders seem Mr ArKy,Ko Ei Maung,Ko Ngwe Htun and Ko sun as I can reach my eyes and now we are finalizing the projects with editing and fixing the mistakes.The project's source code is here .It seem the project co-ordinator isamozilla man named Mr.Arky.…
Added by Thanyawzinmin on July 13, 2011 at 5:30pm —
Zawgyi Font inaMAC OS(Apple) Video (REF: http://unobusa.org/2010/10/30/zawgyi-font-in-a-mac-osapple-video/)
﻿﻿﻿Here is the instruction Video for how to download and install Zawgyi Font (Burmese) inaMAC OSX (Apple Computer). Keyboard layout is the same with Windows, but do research yourself when you are trying to use (Alt) key in OSX instead of (Atl+Tide) key in Windows.
Added by NYI HLA on July 11, 2011 at 3:08pm —
No Comments Job Vacancy Service Technician ( with or without work experience)
Post : Assistant IT Technician (Junior) with or without work experience Job Description: 1) Provide hardware troubleshooting and repair desktops. 2) Provide software and network troubleshooting and resolves software problems. 3) provide data recovery services. 4) Assist in AntiVirus platform maintenance, for servers and desktops 5) Assist in IT projects and ad hoc tasks 6) Maintain service records and provide weekly reports.… Continue
Added by Phyo Zayar on July 11, 2011 at 12:08pm —
Setting up Huawei c8600 mobile phone as modem on Ubuntu
Although I have tested only on ubuntu 10.10 with Huawei C8600, it might also work for Huawei C8500 and other Ubuntu versions.
1) Connect your Huawei c8600 mobile phone to your computer.2) Open Terminal. Make sure your device is detected. Type… Continue
Added by trh on July 10, 2011 at 3:27pm —
memory strict တွေ write protect ဖြစ်နေလိုပါ
အကိုတို့ရေ memory strict တွေ write protect ဖြစ်နေလို့ ဘယ်လို့လုပ်ဆိုတာ ဖြေပေးကြပါနော်
Added by kyawtoe on July 9, 2011 at 2:34pm —
To Sell iPad2 (Brand New)
contact akyi.klt@gmail.com Added by A Kyi on July 8, 2011 at 11:12pm —
devillove replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျ22 hours agopeepaw replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျTuesdayNga_Pyort replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျMondayLIquid@crystal replied to peepaw's discussion Monitoring Software ကောင်းကောင်းလေးများသိကြပါလားဗျFridaypyiphyomgmgsoe updated their profileNov 26pyiphyomgmgsoe leftacomment for thinnNov 26pyiphyomgmgsoe replied to pyiphyomgmgsoe's discussion Free SIP for Testing ! ! !Nov 26pyiphyomgmgsoe replied to Aung Myo Htet's discussion About CiscoNov 26Bijamon liked Chaw Chaw kg lay's blog post အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူတွေအတွက် (မြန်မာလို)စာအုပ်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ် (ဦးအောင်ဟိန်းကျော်၊ဦးသိန်းလွင်၊ရွှေမင်းဝန်ဦးဘုန်း.....)Nov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookမြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေးNov 25Bijamon shared Chaw Chaw kg lay's discussion on Facebookမြန်မာ Data Traveller ဆိုက်လေးNov 23Hsatpaing joined Shwe Thaik's groupMyanmar WebsitesNov 22 11